बेलायतको कोरोना जितेर ‘बोनसको जीन्दगी’ – Nepalilink
बेलायतको कोरोना जितेर ‘बोनसको जीन्दगी’
भीम राई जनवरी ९, २०२१
‘यदि ज्ञान बांड्न सकिंदैन भने त्यो महत्वहीन हुन्छन् ।’
भौतिकशास्त्री मिचीको काकुको उक्त्त भनाइले मलाई जिन्दगीमा यदाकदा घचघच्याइ रहेको हुन्थ्यो । आफ्नो जीवन कालमा मानिसले जे अध्ययन एवं अनुभव गरेका हुन्छन् ति सबै बांड्न सके भने समाजले राम्रो फाइदा लिन सक्छ होला जस्तो मेरो मनमा लागिरहन्थ्यो । त्यसैलाई आधार मानेर मैले भर्खरै लिएको कोरोना अनुभवलाई अक्षररुपी भाषामा परिणत गर्ने जमर्को यहां गरिरहेको छु ।
हुन त यस धर्तीमा जीवनरुपी भरयाङ्गको पचपन्न खुटकिलाहरु मैले पार गरिसकेको थिएं । तैपनि वास्तविक जिन्दगीको परिभाषा अझै खोजिरहेको थिएं । झन् कुनै कुनै बेला यस्तो लाग्ने गर्दथ्यो कि जन्मदेखि मृत्युसम्मको समय मात्र ‘जीवन’ हो र बांकी सबै परिभाषित नगरिएको एउटा कथा जस्तै ।
अं यसरी नै मेरो जिन्दगी एउटा ९० डिग्रीको कोण झैं सिधै उंभो चढिरहेको थियो । तर, अनायसै एकदिन जिन्दगी खाली पानामा सिसाकलमले कोरिएका बक्ररेखा झैं लरबरिंदै आयो । अकस्मात त्यसरी कोरिएका बक्ररेखा आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक धरातलभन्दा सोर्है आना फरक भएर आएको थियो । तर त्यसले पारेको असरले जीवनमा एउटा नरमाइलो छाप छाडिराखेर सधैं सधैंको लागि बिदा भएर गयो ।
१८ डिसेम्बर २०२०, कृष्णपक्षको एउटा कालोदिन थियो । कोरोना महामारीको बेला अग्रपंक्तिमा रहेर कर्तब्यपथमा लडाईं लडिरहेको दुःखी छोरो शिथिल र क्लान्त शरिर लिएर त्यस बेलुकी घर आएको थियो । त्यसै त बेलायती डिसेम्बर महिना दिउसोको चार बजे नै रात पर्ने गर्दथ्यो । त्यसमाथि झन् कालो, मैलो र धमिलो कुहिरोले छपक्कै ढाकेको उसको अनुहार घरभित्र छिर्दा सदाझंै अनुहारमा दिप्त प्रकाशका ज्योति देखापर्न सकिरहेका थिएनन् ।
घर भित्र पस्ने बितिक्कै, ‘खत्तम भइयो ?’ भन्ने एउटा शकांस्पद प्रश्न हावाको गति संगसंगै उसले पठायो । निमेषभरमा उसको त्यो प्रश्नबाचक शब्द तारा र मेरो कानसम्म पुगेर ठोकियो, किनभने हामी दुवैजना उसको नजिकै कुर्सीमा आराम गरेर बसिरहेका थियौं । एकान्त जङ्गलमा कोइलीको बिरहलाग्दो भाकाझैं छोराको बिरहलाग्दो भाकाले किन त्यसो भनेको होला भनेर हामी दुवैजना एकछिन चुपचाप बस्यौं र घोस्सेमुन्टो लगाएर भुईंतर्फ हेरेर घोप्टिरह्यौं ।
‘ड्याडी थर्ममिटर कहां छ ?’
उसले मधुरो स्वरमा दोश्रो चोटी मुख खोलेपछि, सायद उसलाई ज्वरो आएको हुनसक्छ भन्ने मैले आकलन गरिहालें । प्रश्नको उत्तर दिन जरुरी ठानिन त्यसैले चांडोचांडो घरको तलामाथि चढेर थर्ममिटर झारें र उसलाई थपक्कै टक्रयाइ दिएं । थर्ममिटर हातमा पर्ने बितिक्कै उसले आफ्नै ज्वरो नाप्न थाल्यो ।
‘ए ज्वरो त सय डिग्री भन्दा उकालो चढिसकेको रहेछ,’ उसले सानो स्वरमा बरबराएको मैले नजिकबाट सुनिरहें । त्यसपछि, उसको साथैमा बोकिरहेको झोलादेखि ल्यापटप निकालेर माउ पोथी कुखुराले मकैको दानो टकटक टिपे झैं औंलाले घोच्न थाल्यो । उसको साथमा अर्को एउटा सानो झोला पनि थियो । र, त्यस झोलादेखि ‘ल्याटेरल फ्लो टेस्ट’ (एलएफटी) निकालेर आफ्नै सिंगान जांच्न थाल्यो ।
केहि समयपछि एलएफटीको अनुहारमा दुईवटा काला धर्साहरु देखापरें । तिनै धर्सामा परिणत भएको नतिजालाई देखाउंदै कोरोना पोजिटिभ भएको दुःखद समाचार हामीलाई सुस्तरी सुनायो । उसको भनाइलाई मैले थोरै नरमाइलो मान्दै सुनिरहें र थोरै बेखुशी हुंदै एलएफटीको नतिजालाई एकचोटी राम्ररी हेरें ।
हामी त्यसबेला भान्सा कोठामा थियौं, र ताराले उसको लागि खाना तयार गर्दै थिइन् । छोराको दुःखद समाचार सुन्ने बितिक्कै उनी थोरै झस्किइन् र अतालिंदै हामी तिर फर्किइन् । तर, उनीहरु भन्दा म नै अलिक वृद्ध अवस्थामा पुगेको थिएं, त्यसैले भित्रभित्रै डराएको कछुवाझैं एकपोका परिरहें ।
‘मम्मी तपाईं पनि खोक्दै हुनुहुन्छ ? खै तपाईको पनि नाक जांच गरौं ?’
मधुरो स्वरमा छोरोले अर्कोचोटी मुख खोल्यो । अब एलएफटीले नतिजा के देखाउने होला भनेर मलाई पिरको बोझ थपिंदै गयो । ताराको जस्तो नतिजा आउंछ, मेरो पनि त्यस्तै हुन्छ भन्ने मैले भित्रभित्र अन्दाज लगाइसकेको थिएं । त्यसैले, ‘उनी हिउंदे खोकीले मात्र ग्रसित छिन्, अन्य केहि भएको छैन्, जांच नगरेपनि हुन्छ,’ भनेर थोरै सान्त्वना दिन खोजें ।
तर, मेरो भनाइलाई ताराले के मान्थिन् ? एउटा सिङ्गो चामल त के कनिका झैं पनि मानिनन् । त्यसपछि उनी पनि जांचको लागि तयार भइन् । छोराले ताराको नाकमा सिन्काले घोच्न थाले । मैले नरमाइलो मान्दै उसको कार्यगति नियालिरहें, किनभने उनको त्यो परीक्षा नै मेरो आफ्नै परीक्षा झैं मलाई लागिरहेको थियो ।
आधा घण्टाको हैरानीपछि एलएफटीले तारालाई पनि पोजिटिभ भएको परिणाम देखाइदियो । हाम्रो एकजना छोरी पनि थिइन् र उनी हामी भन्दा केहि टाढा अर्को सहरमा बस्थिन् । छोरीले घर छाडेपछि गत महिनादेखि छोरा हामीसंग बस्न आएको थियो । त्यसैले हामी तीन जना एउटा घरमा बस्दै आएका थियौं । ताराको नतिजा आएपछि, ‘मैले बुझें, अब मलाई जांच गरिरहन जरुरी छैन्,’ भनिहालें ।
भन्न त मेरो जांच गर्न पर्दैन भनें, त्यसपछि मेरो मन थोरै बेचैन हुन थाल्यो । ‘अब कुन समयमा के हुने होला ?’ भन्ने प्रश्नवाचक चिन्ह खडा भएर मेरा सामु ठिङ्ग उभिरह्यो । त्यसैले केहि बोलिन, तर थोरै आतंकित र भयभित मुद्रामा सुत्नका लागि आफ्नो कोठातर्फ लागें । तारा कुनबेला आएर मसंग सुतिन केहि चाल पाउन सकिन । जब मध्यरात ढल्कियो, तब म ब्युझंदा हनहनी ज्वरोसंग ब्युझिंरहेको थिएं । मैले गर्लम्मै ओढेको बेलायती जाडो महिनाको शिरक पसिनाले लुथुक्रै भिजेको अनुभव गरिरहें । त्यसपछि हरेक पटक ब्युझंदा खोक्न थालिसकेको थिएं र समय समयमा नाक बन्द हुन शुरु गरेका थिए ।
त्यसरात मानसिक रुपले म मरे तापनि भोलि बिहान सबेरै उठेर तातोपानी उमालेर पिएं । त्यसपछि कम्युटर भएको कोठामा गएर पिसिआर जांच गर्ने ठाउं पत्ता लगाउन थालें । बेलायत सरकारको बेवसाइटमा गएर ‘कोभिड १९’ जांच गर्ने स्थानीय स्थान पत्ता लगाएं । अनि तीनैजनाको परिक्षणका लागि ११ बजेको समय मिलाएं ।
त्यसदिनको मौसम ज्यादै नराम्रो थियो । कालोमैलो बादलले बानबुरी गाउं ढुस्स मात्र भएको थिएन्, सारा आकास रोइरहेको थियो । तिनै रोइरहेको आकाश र रोइरहेको मेरो दिललाई एक्लै कोठामा बसेर निक्कै लामो समयसम्म तुलना गरिरहें ।
यसवर्षको क्रिसमस चाड घरको मुख्यढोका अगाडि आइपुगेको थियो । हरेक वर्ष क्रिसमसको दिन बिजुली चुल्हामा ताराले एउटा भिमकाया टर्कीको ह्याकुल्ला पोल्ने गर्दथिन् । तिनै जिब्रोमा बिलाउने ह्याकुल्लालाई चिथोर्न र क्रिसमसको दुईहप्ता छुट्टी मनाउन घर आउन खुशी भइरहेकी छोरीलाई घरभरि कोभिड छ त्यसैले घर नआउनु है भन्नका लागि मेरा शब्दहरु कुन शब्दसागरबाट निकाल्ने होला भनेर पिरको भुमरीमा रुमलिन थाले । हुनत मेरो जाबो मन पनि उदेककै थियो । कुर्सीमा बसेर कम्युटर हेरिरहेको थिएं, किनकिन दुःखी छोरीको यादमा भुईंमा थचक्कै बसेर धेरै लामो समयसम्म क्वां क्वां रुन मन लागिरह्यो ।
त्यसदिनदेखि घडीको कांटा धिलो घुम्न थालेका जस्तो लाग्न थाल्यो । हरेक सेकेण्ड, मिनेट र घण्टा हुंदै बल्लबल्ल घडीले दिनको एघार बजायो । तारा केहिबेर अगाडि उठेकी थिइन्, तर छोरा त्यसबेलासम्म उठन सकिरहेको थिएन । म उसको कोठा बाहिर पुगेर तेश्रो चोटी कराएं । मैले ठूलो स्वरमा कराएपछि थरथरि काम्दै निक्कै मुश्किलले छोरो उठ्यो र एकचोटि आङ्ग तन्कायो । ऊ उठने बितिक्कै हामी ‘उडग्रीन मनोरन्जन केन्द्र’ बानबुरीमा पुगेर पिसिआर परिक्षण गरयौं । स्थानीय सरकारले उडग्रीन मनोरन्जन केन्द्रलाई अल्पकालिन ‘कोभिड केन्द्रमा’ परिणत गरेको थियो ।
पिसिआर परिक्षणपछि घर फर्किरहेका थियौं । तर, ज्वरो र सुख्खा खोकीले हामी सवैजना ग्रसित भएर थकित मुद्रामा थियौं । हामी कसैलाई बोल्ने जांगर चलिरहेको थिएन । मैले कार हांकिरहेको थिएं र आफ्नै धुनमा बीबीसी रेडियो एकोहोरो बजिरहेको थियो । रेडियोबाट ठिक १२ बजे आंफै समाचार भट्टिन थाल्यो । बेलायतमा कोभिड १९ ले हरेक दिन आठ नौ सय जनाको हाराहारीमा मानिसहरुले जीवन गुमाईरहेका छन् भन्ने समाचार फियोना ब्रुसले दुःखी हुंदै पढेको सुन्दा तारा झसंग भइन् र उनको कागखुट्टीलाई थोरै तन्काइन् ।
उनले त्यसबेला खुट्टी मात्रै तन्काएकी थिइनन्, ‘अब के हुन्छ ?’ भनेर मतर्फ इङ्गित गर्दै एउटा छोटो प्रश्न गरिन् । मैले प्रत्युत्तरमा, ‘जे नहुनु थियो, त्यो भइहाल्यो । आखिर कोही मानिस अजम्बरी हुंदैनन् र मर्न कसैलाई रहर छैन् । अहिले मृत सन्जिवनीको बुट्टीले पनि कसैलाई काम गर्नेवाला छैन् । तिम्रो जीवनको अन्तिम इच्छा के के छन् भनिराख्नु हामीमध्ये जो बांच्न सक्छौं उसले हाम्रा अभिष्ट इच्छाहरु पुरा गर्ने प्रयत्न गरौं । तर, त्यसो भनिरहंदा कुनैपनि मूल्यमा तीस वर्षे छोरोको मृत्यु चाहिं हेर्न म सक्त्तिन होला ?’ सुस्तरी उनलाई भनें ।
मैले त्यसरी छाड्दै गरेका शब्दहरुबाट निर्माण हुने बाक्यांश पुरा हुन नपाउंदै ताराका नयनहरु नराम्रोसंग रसाएको मैले दुर दृष्टिदेखि नजर लगाइरहें । गह भरिएका उनको आंशुले स्वस्थान छाडेर मुल फुटेपछि मलाई हल्का नरमाइलो लागेर आयो । हामी बानबुरी गाउंको एउटा सानो बाटोमा थियौं । त्यसै त छोरा आवश्यकता भन्दा पनि अझ थोरै बोल्दथे, झन बिमार भएपछि उसको मुखबाट एउटै शब्द फुत्किन सकेका थिएनन् ।
‘हेर गतवर्ष मात्र छोरोले बिहे गरेको भए सायद यो वर्षसम्ममा एउटा नाति जन्मन सक्थ्यो होला ?’
आंशुसंग मिश्रित भाषामा तारा दोश्रो चोटी बोलिन् । उनको भनाइ सुनेपछि कसको इहलिला कुनबेला समाप्त हुने र कुन शब्द अन्तिम हुनेहोला भनेर म भित्रभित्रै पिरोलिरहेको थिएं, त्यसैले उनको भनाईलाइ केहि वास्ता गर्न सकिरहेको थिइन् ।
केहि समयपछि हामी घरमा पुग्यौं । घरभित्र छिर्ने बितिक्कै छोरो उसको कोठामा पसिहाल्यो । म पनि कतिबेला घर पुगेर आराम गरौं भइरहेको थिएं त्यसैले केहि नबोलि सुत्न हिडिहालें ।
दुईघण्टा जति आराम गरेर म पुनः उठें र विस्तारै मुनी तला झरेर भान्सा कोठामा पुगें । किनभने तारा भान्सा कोठामा नै मज्जाले आराम गरिरहेकी थिइन् । हामी चारकोठे घरमा बस्दै आएका थियौं र हाम्रो घरमा चारैवटा शौचालयहरुको सुविधा पनि थियो । म ताराको सामुन्ने पुगेपछि अबदेखि को को कहांकहां सुत्ने र कसले कुन शौचालय प्रयोग गर्ने भनेर भाग लगाउन थालेको थिएं ।
तर ताराले, ‘आ… ठिक्कैछ, संगै जिउने संगै मर्ने हो,’ भनेपछि मेरो योजना भताभुङ्ग त यसै भयो । अझ उनको भनाइ सुनेर नेपालमा सतीप्रथा त उन्मुलन भइसकेको थियो । तैपनि बेलायती हजुर महारानीको देशमा छिट्टफुट्ट बांकी रहेछ भन्ने मलाई त्यसबेला लागि रह्यो ।
हाम्रो घरको पूर्व दिशामा हार्डवीक हिल थियो । तिनै हार्डवीक हिलको क्षितिजदेखि हरेकदिन एउटा कष्टकर बिहानी उदाउंथ्यो र पिरको भारी संगसंगै अंध्यारोमा परिणत भएर बेलुकी अस्ताउंथ्यो । निक्कै दुःखले ४८ घण्टा समय बितेपछि पिसिआरमा सबैको नतिजा पोजिटिभ भएको विधुतीय पत्रबाट हामीलाई जानकारी भयो । र, अगामी दश दिनसम्म घरदेखि बाहिर निस्कन निषेध गरिएको छ भन्ने खबर पनि तिनै राष्ट्रिय स्वस्थ्य सेवा विभागदेखि चाल पायौं । तर के गर्ने ? दुर्भाग्यवस त्यसबेलासम्म मैले मेरो जिब्रोलाई बिदा गरिसकेको थिएं । केहि खान मन लाग्दैन् थियो । अझ त्यतिमात्रै कहां हुनु कुनैपनि कुराको स्वाद पाउन छाडिसकेको थिएं ।
हामी शान्त वातावरण रोज्ने भएर शहरदेखि केहि टाढा एउटा गाउंमा बस्दै आएका थियौं । हाम्रो घरदेखि सबैभन्दा नजिकको अर्को नेपालीको घर कार यात्रामा लगभग चालिस मिनेट जति लाग्दथ्यो । तैपनि बेलायतमा ब्यस्त जिन्दगी ब्यतित गर्नुपर्ने भएकाले प्रायः भेटघाट शून्य हुन्थ्यो । अझ कोभिड सुरु भएपछि घरदेखि बाहिर निस्कन लगभग छाडिसकेका थियौं । जसले गर्दा बेलायतमा अर्को नेपालीसंग भेट नभएको लगभग एकवर्ष भइसकेको थियो । त्यसैले हरेक दिन घर पछाडिको बगैंचामा खङरङ्गै पात झरेर अर्धमृत अवस्थामा रहेका स्याउ, चेरी र आलुबखडाका बिरुवाहरु हेरेर मन भुलाउने प्रयत्न गरिरहेको हुन्थें ।
तारा र मलाई तीन दिनपछि ज्वरोले चट्टै छाड्यो । तर छोरालाई क्रमशः चार दिनसम्म सताइ रह्यो । ज्वरोसंग जुध्नको लागि घरमा भएको जति सिटामोल छोराले सबै खायो । मैले चाहिं पानीपट्टीले ठिक गरें । हामीबाट ज्वरोले त विश्राम लियो, तर मेरो नाकले भने हैरानी खेप्न थालिसकेको थियो । त्यस बेलादेखि मैले सबैप्रकारको सुगन्ध वा दुर्गन्ध लिन छाडिसकेको थिएं । गन्धले जिन्दगीमा त्यति धेरै असर नपारेपनि समय समयमा चल्ने खोकीले आन्द्राभुंडी नै उछिट्याउला जस्तो गर्दा अहिले नै मरि हालौं कि क्या हो भन्ने अनुभूत भइरह्यो ।
घर बाहिर जान निषेध थियो, तैपनि छडके जांच गर्नका लागि राष्ट्रिय स्वास्थ सेवाबाट समय समयमा फोन आइरहन्थ्यो । हरेकदिन एउटा नयां दिन आउथ्यो तर नयां हर्ष, उमङ्ग र खुशी आउंदैन थियो । त्यसको सट्टा प्रत्येक दिन झरी परिरहेको हुन्थ्यो र झरी नपरेको दिन आकाशदेखि हिउंका सेतासेता भुवाहरु झर्थे, तर हिउं जमिनमा अडिन नपाउंदै बिलाएर जान्थे । तिनै जमिनमा अडिन नसकेका हिउंसंग अस्ताउन लागेको हाम्रो जिन्दगीको नरमाइलो तुलना गरिरहन्थें ।
त्यस्तो पीर, भय र त्राशले सन्नाटा छाएको अमिलो दिनहरु धेरै लामोलामो हुने गर्दथे । हरेक मिनेट र घण्टा क्लान्त र शिथिल शरीरसंग पैंठैजोरी खेलिरहेका हुन्थे । अनि आलश्य, थकान र हैरानीसंग समय गुज्रिरहने गर्दथे । अझ कुटुकुटु खाइरहेको ह्दयमा कुनबेला कसको श्वासप्रश्वासमा समस्या आउने होला भनेर भयभीत मुद्रामा पीडादायी जीवन ब्यतित गरिरहेका थियौं ।
अलिक सन्चो भएपछि ताराले मिठा मिठा भोजन बनाउने प्रयत्न गरिन् । तर हामी कसैलाई केहि खान मन लागिरहेको थिएन् । किनभने हामी सबैले खानाका स्वाद गुमाइसकेका थियौं । बडो कष्टप्रदको १० दिन बितेपछि जिन्दगीमा थोरै खुशीका लहरहरु देखापर्न थालेका थिए ।
‘यतिन्जेल सम्म बांचियो, अब त के मरिन्थ्यो होला र ?’
अर्धमृत अवस्थामा जिइरहेकी ताराले त्यसरी एकाबिहानै मुख खोल्दा मलाई थोरै भएपनि राहत मिलेको थियो ।
समयले नेटो काटिरहेको थियो । कोभिड संक्रमणले दुईहप्ता पार गरेपछि पुनः कोभिड केन्द्र पुगेर दोश्रोचोटी स्वाब परिक्षण गरयौं । चिन्तित ७२ घण्टाको प्रतिक्षापछि नेगेटिभ नतिजा हात पारेर हामी ढुक्क भएका थियौं । निश्चय नै हामीले कोरोनापछि पुनर्जीवन पाउन सकेकोमा केहि हदसम्म खुशी त भएका छौं, तर महामारीले धर्तीका सबै मानिसहरु भाग्यमानी हुन नसकेकोमा धेरैधेरै दुःखी बनेका छौं ।